Hogaamiye sare oo shiico ah oo ku baqay dagaal ka dhan ah ISIS – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hogaamiye sare oo shiico ah oo ku baqay dagaal ka dhan ah ISIS
13th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Baqdaad – Mareeg.com: Dagaalyahanada la magacbaxay dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaama (ISIS) ayaa qabsaday magaalooyin hor leh oo ka tirsan dalka, iyagoo wada dedaalka ay ku doonayaan iney kula wareegaan caasimadda dalkaas ee Baqdaad.
Magaalooyinka ISIS la wareegtay ayaa waxaa ka mid ah Jalowla iyo Sadiyah kuwaasoo ka tirsan gobolka Diyali.
Dhanka kale, Shiicada dalka Ciraaq ayaa ku baaqay dagaal ka dhan ah kooxda Sunniyiinta ee dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam ee loo soo gaabiyo ISIS, kuwaasoo wada la wareegidda magaalooyinka hor leh oo ka tirsan Ciraaq.
Khudbad uu lahaa hogaamiyaha ugu weyn Shiicada Ciraaq Cali Al-sistani oo manta salaaddii Jumacaha aqriyey wakiilkiisa Sheekh Cabil-mahdi Al-karbalaa’I ayaa Shiiacada Ciraaq loogu baaqay iney u istaagaan jihad ka dhan ISIS.
Cabil-mahdi Al-karbalaa’I ayaa ugu baaqay dhamaan Shiicada hubka qaadi karta iney ka hortagaan kooxda Sunniyiinta ee dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam, islamarkaana ay ka difaacaan goobaha ay leeyihiin Shiicada ee ay rumeysan yihiin iney barakeysan yihiin.
Mareykanka ayaa ka fekeraya tilaabada ay u qaadayaan dhanka Ciraaq, iyadoo ay muuqato in dowladda ay taageeraan laga qabsaday dhul badan.
ISIS oo sidoo kale ka dagaallanta dalka Suuriya ayaa la sheegay iney heleen hub aad u farabadan, kaasoo ay kala baxeen xerooyinka ciidamada Ciraaq, kuwaasoo ka cararay magaalooyinka Muusil, Tikrit iyo kuwa kale.
Xildhibaano iyo wakiilo ka socda UN oo tegay Xudur
Kolonyo mucaawino sida oo gaaray Waajid